မြင့်မားသောပါဝါ LED အတွက် MCPCB သည် LED ပြွန်အလင်းအတွက် Smart Electronics MCPCB
၁။ မည်သည့် PCBS အမျိုးအစားကိုသင်ကျွမ်းကျင်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Singe-side PCB၊ Double-side PCB၊ Multilayer PCB၊ Aluminum PCB, Spray Tin PCB, Immersed Gold PCB စသည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။
ခဲအချိန်သည်များသောအားဖြင့်ဤနေရာတွင်အချိန်တိကျသည်၊ များသောအားဖြင့် PCB နမူနာအတွက် 3-5days, 7-15 days အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်။ အချို့သောအထူးအခြေအနေများအတွက်သုံးစွဲသူဘက်မှမျှော်လင့်ထားခြင်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်အားကြိုတင်အကြံပေးနိုင်သည်။
နမူနာများအတွက်, များသောအားဖြင့်ပျံသန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး; PCB Volume အတွက်စတုရန်းမီတာ (၃) စတုရန်းမီတာကျော်သောသူတို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်။ PCB ထုတ်လုပ်မှုတွင်အဆင့်များစွာရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အဆင့်တိုင်းကိုစစ်ဆေးသည်။
4.Page package ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်ဖောက်သည်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တခါတရံ DHL, TNT, UPS, FedEx စသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့်တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ပေးသူသည်အမြန်ပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုထိုအမြန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတိုက်ရိုက်ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှစတုရန်းမီတာ ၃၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။
၇။ ကျွန်ုပ်သည် PCB နမူနာမဟုတ်ဘဲ PCB ဖိုင်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သလား။
ဟုတ်တယ်၊ မင်းရဲ့နမူနာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖိုင်ကိုကူးယူလို့ရတယ်၊ Gerber ဖိုင်နာမည်နဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုကို Gerber ဖိုင်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်။
8. Gerber ဖိုင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲလို့ရမလား။
ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မည်သည့် PCB ဖိုင်အမျိုးအစားကိုသင်လက်ခံနိုင်သနည်း။ မည်သည့် CAM software ကိုသင်အသုံးပြုပါသလဲ။
ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Gerber ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသည်။ CAM350, GENESIS, UCAM, CG-CAM, V-2000 ။
ဟုတ်ကဲ့၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာဒီလိုလုပ်တာပါ။ ဒီနည်းအားဖြင့်ဖောက်သည်တွေကကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလျှော့ချနိုင်ပြီးစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ MOQ တွင်ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ၊ ရှေ့ပြေးပုံစံ၊ အလယ်အလတ်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ကြီးမားသောအသံပမာဏကိုလက်ခံနိုင်သည်။
ROHS ခဲ - အခမဲ့ Custom Custom ။ ဘုတ်များကိုခဲ - ကင်းအမှတ်သင်္ကေတဖြင့်မှတ်သားထားသလား။
မည်သည့်ဖောက်သည်၏ဖိုင်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံတွင်အလွန်ကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ထားမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးမည်မဟုတ်ပါ။ NDA လက်မှတ်ထိုးနိူင်ပါတယ်
ရှေ့သို့ အလူမီနီယမ် LED မီးလုံးအလင်း PCB, OEM MCPCB ထုတ်လုပ်သူ
နောက်တစ်ခု: Control LED Light အတွက် PTR / IR Sensor Printed Circuit Board PCB
Mcpcb ဦး ဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ပါဝါအလူမီနီယံ LED PCB 220v, ...
တိုက်ရိုက်အပူလမ်းကြောင်း MCPCB နှင့် Sink-Pad MCPCB, C ...
LED MCPCB ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်များ PCBA ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ...
ရှန်ကျန်းထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်လူမီနီယံ PCB MCPCB နှင့်အတူ ...